Ku saabsan COVID | Ningbo Care Medical Instruments Co., Ltd.
Ku saabsan COVID
Horay U Wada Soco
Cudurka faafa ee COVID-19 wuxuu u soo bandhigay bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka caqabado aan horay loo arag. Caqabadahaasi waxay u baahan yihiin xawaare iyo natiijooyin aan horay loo arag. Ningbo Care Medical waxaa loo qoondeeyay inay kaa caawiso inaad u gudubto isbeddelada oo aad ka gudubto caqabadaha cusub.Waxaan bixinnaa ilo iyo qalab gacan ka geysanaya taageerida la qabsiga xaaladda cusub ee maanta sida xawliga ah isu beddeleysa.
Raadinta Caadiga Cusub
Talaabada ugu horeysa waa inaad xasiliso xaaladaada dhaqaale adiga oo diirada saaraya yareynta kharashyada, hagaajinta isku xirnaanta isku xirnaanta sahayda, dib u habeynta mashiinka dakhliga, iyo hubinta tayada.
SIDA LOO SAMEEYO XIGTA
Marka xigta, la jaanqaad suuqa caadiga ah ee cusub adoo hoos u dhigaya salka qiimaha, dib u qaabeynta bixinta daryeelka, yareynta halista, iyo kobcinta kalsoonida.
Ugu dambeyntiina, u xuub si aad u hubiso guushaada muddada-dheer ah marka aad hagaajiso farqiga u dhexeeya, dib u qiyaaseyso Nidaamka 'CARE', aad u beddesho tayada kiliinikada, oo aad ku guuleysato hawlgallo lagu kalsoonaan karo oo sarreeya.
Raadi Katalogi Ka Kooban 19 Kheyraad